Rohamena CRL-40,941 (90212-80-9) mpanamboatra - Phcoker
SKU: 90212-80-9 Sokajy: Drug Smart
Rohe CRL-40,941 roinde-na (90212-80-9) video
Rohamena CRL-40,941 (90212-80-9) Description
Ny voam-barotra CRL-40,941 (fantatra amin'ny hoe fladrafinil sy fluorafinil) dia eugeroic akaiky mifandray amin'ny adrafinil sy modafinil. Izy io dia ny dipoavatra (p-fluoro) amin'ny boriborin-danjan'ny adrafinil. Ny voly CRL-40,941 roahin'ny CRL-XNUMX dia hita fa mitondra vokatra manohitra ny fiompiana biby, izay tsy mamokatra ny adrafinil.
Rohamena CRL-40,941 (90212-80-9) Specifications
Product Name Rohamena CRL-40,941
Anarana simika 90280-13-0; CHEMBL1672359; Acetamide, 2 - [[bis (4-fluorophenyl) methyl] sulfinyl] -; 2 - ((bis (4-fluorophenyl) methyl) sulfinyl) acetamide; CRL-40,940 / Flmodafinil; SCHEMBL9217358 More ...
molekiolan'ny Formula C15H13F2NO3S
molekiolan'ny Wvalo 325.3304264
Monoisotopic Mass 325.33 g / mol
mitsonika Point 90-91 ° C
Ny antsasaky ny biolojia 6 hatramin'ny ora 7
Solubility Azo havaozina amin'ny methanol, kely loto amin'ny ethylacetate sy dichloromethane, saika tsy voavolavola ao anaty rano.
Application Ny molekiola CRL-40,941 roapolo dia diplaomatika tsy misy aotropic sy fifantohana izay mitovy amin'ny adrafinil.
Ny CRL-40,941 (fantatra ihany koa amin'ny fladrafinil sy fluorafinil) dia eugeroic izay mifandray amin'ny adrafinil sy modafinil. Izy io dia ny dipoavatra (p-fluoro) amin'ny boriborin-danjan'ny adrafinil. Ny voly CRL-40,941 dia hita fa mitondra vokatra manohitra ny fiompiana biby, izay tsy mamokatra ny adrafinil.
Noforonin'ny orinasa frantsay Pharon Laboratories ho toy ny fikarohana vaovao momba ny fikarohana.
Ahoana ny fiasan'ny CRL-40,941 powder (90212-80-9) asa
Fladrafinil, na CRL 40,941 vovoka dia manana karazana neuropsychopharmacological mitovy amin'ny adrafinil, izay mpitsabo psychontonic fantatra. Tsy toy izany kosa ny fanoherana ny herisetra manohitra ny herisetra sy ny vokatr'izany amin'ny famintinana herinaratra. Voamarika ihany koa fa ny Fladrafinil na ny CRL 40,941 dia manome tombony hafa momba ny adrafinil momba ny fanamoriana ny làlana am-bava; Raha ny marina, ny fladrafinil, toy ny psychotonic agent, dia mazava loatra fa avo roa heny mahomby amin'ny lalana am-bava, amin'ny rat sy ny olombelona, ​​fa tsy adrafinil.
Ny atiny dia manampy amin'ny fampifangaroana ny fladrafinil amin'ny fomba mahasoa ny modafinil. Manampy ny olona hanatsara ny fomba fiasan'ny atidohany izany rehefa miezaka mifantoka sy mitazona fahamailoana izy ireo. Fladrafinil koa dia misy fiantraikany eo amin'ny rafi-pitabatabana ao an-tokantrano ary manampy amin'ny fanakanana ny dopamine amin'ny dopamine ao amin'ny atidoha. Na dia tsy mazava tsara aza ny fomba fiasan'ny zava-mahadomelina ity, dia voaporofo fa manampy ny olona handresy ny torimason'izy ireo amin'ny andro iray izy ireo na hiasa asa fahatelo, nefa tsy mahatsiaro ho matory mandritra ny fiovan'ny alina.
soa of CRL-40,941 powder (90212-80-9)
Mampandroso ny fahatsiarovan-tena
Mitombo ny faharetana
Manamafy ny fifantohana sy ny fifantohana
Manatsara ny fahatsiarovana sy mamerina
Manamafy ny fahaiza-mianatra
soso-kevitra CRL-40,941 powder (90212-80-9) Dosage
Tsarovy fa ny CRL 40,941 dia mahery kokoa noho ny adrafinil. Ny mpampiasa vaovao dia manolo-tena hanomboka amin'ny dosage 30-80 mgs ao anatin'ny ora 14-16 isan'andro, ary ny dosin adrafinil dia miavaka eo anelanelan'ny 30-100 mg isan'andro. Mety hampitombo ny dosage rehefa mahatsapa ny voka-dratsiny rehefa manomboka ny doka ny vatana. Nefa ny dosage dia tsy tokony hihoatra ny 200mgs isan'andro.
Tsy misy fiantraikany ratsy amin'ny fladrafinil, na dia misy aza milaza fa mampitombo ny fofon'ny fofom-pirazanana ny fanafody. Ankoatr'izay, voamarika ihany koa fa ny tsy mitongilana dia miteraka fihetsiketsehana - fampitomboana ny fantson-dra. Fanamarihana fa ny voka-dratsin'ny zava-mahadomelina dia ratsy lavitra noho ny tombony azo raisina dia mihamitombo. Na dia izany aza dia tsy misy porofo matanjaka hanamafisana na handà fa raha misy amin'ireo fiantraikany ireo dia misy ifandraisany mivantana amin'ny fanaovana fladrafinil.
1 famerenana for Rohamena CRL-40,941 (90212-80-9)
Nahazo vovony CRL-40,941 mba hitsapana, mampiseho ny vokatra avo lenta sy ny fahadiovana!